Nadiifinta geeska dhulka hoostiisa ee Gaadiidka Dadweynaha Izmir | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirNadiifinta geeska dhulka hoostiisa ee Gawaarida Gaadiidka Dadweynaha İzmir
18 / 01 / 2020 35 Izmir, tareenka, Turkish Aegean, SAWIRADA, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Metro, TURKEY, taraamka
Nadiifinta geeska hoose ee Gawaarida Gaadiidka Dadweynaha ee Izmir
Nadiifinta iyo jeermis-ka-qaadashada howlaha gawaarida dadweynaha ee ku xiran İzmir Magaalo-weyne ayaa si aan kala go 'lahayn u socon. Faafidda cudurka hargabka, oo ku kordha bilaha jiilaalka, ayaa sidoo kale la isku dayaa in lagu yareeyo iyada oo la nadiifinayo daraasadaha.
Nadiifinta iyo waxqabadka jeermiska waxay ku sii socdaan baabuurta gaadiidka dadweynaha ee ku xiran İzmir Magaalo Weyn. Kooxaha takhasuska leh ee wata shahaadooyinka nadaafadda iyo fayadhowrka nadaafadda ayaa nadiifiya kuraasta, sagxadaha musqusha, tirtira daaqadaha iyo sagxadaha dhinacyada baabuurta dadweynaha. Gacanta, warqadaha gacanta iyo galka gacmaha ee rakaabka ay la xiriiraan sidoo kale waa la jeermiyay. Dhamaan howlahaani waxay adeegsadaan agabyada nadiifinta ee la ansixiyay TSE oo aan waxyeello u laheyn caafimaadka aadanaha.
Nadiifinta gudaha iyo dhaqidda in kabadan 1600 oo basas ah oo lagu kala iibsado ESHOT iyo IZULAŞ ayaa lagu fuliyaa todoba garaash oo ku yaal magaalada oo dhan, qeybaha lagu dhaqo dib-u-warshadaynta. Basasku sidoo kale waxay marayaan jeermis-dilis laba toddobaad kasta.
Kuraasta waa la ridayaa
182 tareenka dhulka hoostiisa ah iyo 38 gawaarida taraamka ah ayaa si otomaatik ah loogu maydhayaa qaybta maydhista burushka maalin kasta; dheecaanka jeermiska jeermiska ayaa la sii qaatay oo loo diyaariyey in la isticmaalo. Mar mar, alaabada sida kuraasta iyo gacanta ayaa gabi ahaanba laga saaraa oo si faahfaahsan ayaa loo nadiifiyaa.
Qaboojiyeyaasha hawadu lama illaawaan
Tareennada İZBAN sidoo kale waa la nadiifiyaa oo waa la nadiifiyaa goobta shaqada ee Çiğli maalin kasta inta u dhaxaysa 01.30-05.30 ee Aliağa, Menemen, Cumaovası, Torbalı, Tepeköy iyo Selçuk saldhigyada. Miirayaasha hawada qaboojiya ayaa la nadiifiyaa labadii toddobaadba mar; Waxaa taageera ur uuminta bakteeriyada dila jeermiska.
Maraakiibta gudaheeda İZDENİZ, nadaafadda iyo hanaan-jeermiska ayaa la qabtaa habeen walba laga bilaabo saacaddu markay tahay 23.00. Kuraasta, wiishashka, sagxadda, galaasyada iyo sagxadaha dhinacyada, wiishka gacmaha, garka gacmaha waxaa si nadiif ah loo nadiifiyaa; musqulaha iyo weelka lagu qubeysto ayaa sidoo kale loo sameeyay caafimaadka.
Dhabarka Nadiifinta Wareegga Metrobuses Isticmaalida Malaayiin
Nadiifinta geeska hoose ee Basaska EGO
Nadiifinta Gaadiidka Dadweynaha ee Gaadiidka Caafimaadka ee Sakarya
Gaadiidka dadweynaha ee bilaashka ah ee Istanbul
Shirkadda Samsun Trams ayaa Guul ka Gaartay Howlaha Hawada Kuleylka Barafka
Gaadiidka Gaadiidka Dadweynaha ee ku yaalla Istanbul u socdaal shaqo
Ku dhawaaqida qandaraaska: Saadaalinta howlaha daadguraynta, nadiifinta goobta shaqada iyo gaadiidka gaadiidka…
Nadaafadda Gaadiidka Gaadiidka Gawaarida, Badbaadinta Kooxaha Nadiifinta
Gawaadhida baabuurta dibedda laga keeno, kor u kaca dhoofinta
350 kun qof ayaa ku dhexjira gaadiidka dadweynaha ee Kayseri
Wasiirka Arrimaha Gudaha: kamaradaha gaadiidka dadwaynaha ma diiwaan galin codka
Rakaabka ayaa sida gaadiidka dadweynaha u raacay Shiinaha iyo Maraykanku isaga oo raacaya gaadiidka dadweynaha ee Istanbul
Ma jiraan albaabyo fayrus ah oo ku jira gaadiidka dadweynaha
Waqtiga kamaradeynta ee gaadiidka dadweynaha ee Antalya
Waajibaadka Waajibaadka ee Wasaaradda Gaadiidka Inay Hesho Mushahar la'aan Iyadoo Ay Shaqeynayso
Degmada Metropolitan Municipality
Gaadiidka dadweynaha ee Izmir
Nadiifinta Gawaarida Gaadiidka Dadweynaha ee İzmir
Qiimaha Gaadiidka Dadweynaha Gaziantep Ayaa Kordhiyey